Fitaovana Google Adwords maimaim-poana | Keyword Planner
Taonina ny olona manao fikarohana Google amin'izao fotoana izao
Afaka mahita anao izy ireo?
Tadiavo ny tsara teny fanalahidy
Manomboha nitendry mba hahita ny tsara indrindra teny fanalahidy. Mahita fironana vaovao:
Hanivana ny valiny.
Fantaro ny fahafahana tonga lafatra.
Ny mahery sy ny drafitra fitaovana fanivanana dia ahafahanao mamantatra intuitively sy haingana ny tenifototra tena fahafahana ianao liana amin'ny. Izahay rehetra-in-iray Keyword Planner dia tsy mila fitaovana hafa mba hanao fikarohana Keyword feno.
Hamorona mots-clés lisitra ary hahazo ny farany indray mitete avy ao ny heriny.
Save sy ny vondrona ny teny fanalahidy ao amin'ny lisitra mba hahafahanao mitantana azy ireo amin'ny fotoana rehetra amin'ny Clever Ads Keyword Planner. Afaka mamorona lisitra vaovao ianao manomboka amin'ny rangotra, fanavaozana ary fampifangaroana azy ireo na famindrana teny lakile amin'ny lisitra iray mankany amin'ny iray hafa.
Mitadiava fa ianao no havana teny fanalahidy noho ny raharaham-barotra
Discover an'arivony teny fanalahidy vaovao sy mahazo valiny marina amin'ny alalan'ny sivana mba mifantoka afa-tsy amin'ny teny fanalahidy izay tena mahaliana anao. Amin'ny fanaraha-maso ianao.
Mamorona lisitra vaovao, na hamita ny efa misy lisitra
Rehefa efa nifidy ny teny fanalahidy, ianao ho afaka mamorona vaovao ho azy ireo lisitra na ahitana azy ao amin'ny iray efa misy. Mitantana azy ireo sy milalao azy araka izay tianao - hanadino ny Excel.
Ampidiro mivantana amin'ny fanentanana Google Ads anao ny teny Google Ads
Alefaso mora foana ny teny lakile amin'ireo Google Ads fanentanana Google Ads amin'ny tsindry iray. Tadiavo indray mipi-maso ireo teny fanalahidy izay tsy hitanao amin'ny fampielezan-kevitrao ary manatsara ny zava-bitanao
Mahita teny fanalahidy vaovao na aiza na aiza
Clever Ads Keyword Planner dia natao manokana handefasana herinaratra faran'izay betsaka amin'ny fitaovana rehetra. Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Beat mpifaninana amin 'ny Chrome Extension
Browse mpifaninana toerana sy hahita ireo teny fanalahidy izay manampy azy ireo mahasarika fifamoivoizana.
Ny endri-javatra tsara indrindra? Ny mpampiasa.
Ao amin'ny Clever Ads , tsy misy zava-dehibe aminay mihoatra ny mpampiasa sy ny mpanjifanay. Jereo izay lazain'izy ireo:
“I indrindra tahaka ny fanitarana Chrome dia mandroso toy izao ianareo dia afaka mamakafaka toy izany koa aho vohikala ary hahazo hevitra avy amin'ny tenifototra ampiasainy. Izaho koa mankafy fa Afaka maka ny vaovao rehetra mikasika ny teny fanalahidy maimaim-poana izany aho, dia afaka manao tsara kokoa sy kokoa baovao fanapahan-kevitra.”.
“Ny teny fanalahidy I mahazo avy amin'ny Google Keyword Planner matetika levitra loatra fa tsy tena famaritana ... izany no mahatonga Aleoko Clever Ads Keyword Fitaovana Research. Manome valiny feno ahy io satria mahazo angona avy amina loharano maromaro izy ireo, ary koa tsy mila manana Google Ads na misoratra anarana na aiza na aiza aho.”
“Raha vantany vao nampiditra teny fanalahidy vaovao hitako tamin'ny alàlan'ny Clever Ads aho dia nahita fiakarana tao amin'ny CTR an'ny Google Ads . Ankehitriny rehefa misafidy ny teny fanalahidy tadiavin'ny mpihaino aho dia najanoko ny fandaniam-bola amin'ny fisarihana fifamoivoizana ambany kalitao.”
Taonina ny olona mitady asa sy ny vokatra ny ao amin'ny Google. Hanazava ny teny fanalahidy izy ireo dia mampiasa.
Misimisy kokoa momba ny Clever Ads Keyword Keyword Planner
Fantaro ny revolisionera rehetra-in-iray tenifototra fitaovana fikarohana ho an'ny mpivarotra sy ny mpanao dokam-barotra. Hampitombo ny SEO tetikady izao!
Inona no manolotra
Endri-javatra sy ny tombontsoa ny Keyword Planner
Amin'ity fitaovana SEO ity dia hisarika olona tena liana amin'ny orinasanao (vokatra na serivisy) ianao amin'ny alàlan'ny fanondroana ireo teny lakile mety tsara soratan'ny mpanjifanao mety ao amin'ny bara fikarohana Google. Ny Clever Ads Keyword Planner dia noforonina mba hihoatra ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny famoronana teny lakile lava volo ilain'ny orinasanao mba hahombiazan'ny fampielezan-keviny Google Ads Ilaina ny paikady SEO tsara hahombiazan'ny tranokalanao, ary tsy misy dikany ny SEO raha tsy eo ny fikarohana teny lakile tsara. Avelao izahay hanampy anao!
Get marina & mahasoa vokatra noho ny raharaham-barotra
Ny taranaka fitaovana maimaim-poana Keyword hasehoko anao ny manan-danja rehetra teny fanalahidy mifandraika amin'ny fikarohana sy mamela anao hanivana azy ireo ny dokam-barotra Google fototra mari-pandrefesana. Marina ianao mahazo vokatra mba hanao fanapahan-kevitra baovao sy hifidy ny tsara indrindra manao teny fanalahidy ho an'ny fampielezan-kevitra. Ny fanaovana Marketing fanapahan-kevitra eo amin'ny raharaham-barotra nefa tsy tsara baovao, ary manana ny vokatra tsara mety hitarika ho amin'ny fampisehoana sy ny mahantra, noho izany, tsy hahatratra ny tanjona ao amin'ny fotoana tiany. Miaraka amin'ny tenifototra lisitry ny tenifototra pandaharam-potoananao ianao, dia tsy manana izany olana izany, ary maimaim-poana tanteraka!
Adinoy ny momba ny ads
Fantatray fa ny fikirakirana sy famakafakana data ao anaty antontan-taratasy goavambe dia mety hamela anao ho reraka sy ho sosotra, ary koa mitaky fotoana sy loharanom-bola betsaka ampanjifaina ao aminy, manome valiny ratsy. Aza taitaitra fa eto hanampy anao izahay! Ny fotoana tsy maintsy ads Excel spre dia niasa nandritra ny ora maro hanivanana sy handaminana azy ireo. Ny fanatanterahana ny fikarohana ny teny lakile kalitao dia mora izao noho ny fitaovana planner an'ny teny lakolosy Clever Ads Arindrao ny lisitry ny teny lakile anao, atambohy izy ireo, zarao izy ireo na fenoy mivantana avy amin'ny fitaovanay. Tsy andoavam-bola. Tsy misy pirinty kely. Aza taitaitra fa eto hanampy anao izahay!
SEO SY MARKETING fomba fanao tsara indrindra
Hanomboka sy hanampy ny olona hahita anao
Manatsara ny PPC (karama-isan-Click) fampielezan-kevitra sy hampitombo ny ROI (Miverina amin'ny fampiasam-bola) sy ny varotra amin'ny alalan'ny teny fanalahidy lasibatra ny manan-danja ny mpanjifa dia niandrandra ary efa miasa tsara ho an'ny mpifaninana. Tandremo sao tsy mahita fotoana iray, rehefa manao ny Keyword fikarohana.
Ao amin'ny Clever Ads dia manome anao mombamomba anao tsy miangatra amin'ny alàlan'ny fahazoana teny lakile amin'ny loharanom-baovao maromaro, fa tsy amin'ny Google ihany. Matetika ny data an'ny Google Keyword Planner dia mitodika, ary novolavolainay ny fitaovana fanatontosana teny lakile mba hahafahanareo manao fikarohana teny fototra tsara kokoa ary mandray fanapahan-kevitra hendry kokoa amin'ny paikadin'ny fahazoana karama.
Atombohy avy hatrany ny dokam-barotra
Miaraka amin'ny Clever Ads Keyword Keyword Planner dia tsy vitan'ny hoe mitantana ny teny lakileo sy ny lisitry ny teny lakile amin'ny toerana iray ianao ka manamora kokoa sy mora azy io! Azonao atao koa ny mampakatra azy ireo amin'ny Google Ads sy ny vondrona dokanao mivantana avy amin'ny Clever Ads - amin'ny toerana iray daholo! Ny fotoana dia vola ary izahay te-hanavotra anao roa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny teny fanalahidy farany.
Tsy maintsy-manao Keyword Optimization
Tadidio fa tendron'ny ravin SEO fomba fanao tsara indrindra dia ny hoe tokony tsindraindray hijery ny fanatanterahana ny teny fanalahidy mba mampifanaraka ny evolisiona, fijanonana teny fanalahidy izay underperforming satria tsy mahaliana ny raharaham-barotra, ka hizaha toetra vaovao teny fanalahidy izay afaka mampitombo ny fanatontosana ny fampielezan-kevitra. Hatrany foana ny maso Keyword fironana! Keyword fitiliana dia manan-danja ary azo antoka Ho mba hampahatsiahy anao ny teny fanalahidy vaovao farany mba tsy mandany vola tsy amin'antony amin'ny underperforming teny fanalahidy. Izahay Keyword pandaharam-potoananao dia tsy tara na inona na inona.
Inona no mahatonga antsika ho samy hafa
Tongasoa eto amin'ny hoavy ny tenifototra fikarohana sy ny fametrahana mazava tsara SEO
Ny traikefanay tamin'ny famoronana sy fanatsarana ny Google Ads ho an'ny orinasa maherin'ny 150.000 dia manampy anay hahafantatra izay tena zava-dehibe aminao rehefa misafidy teny lakile mifandraika amin'ny orinasanao. Fantatray izay ilainao! Miaraka amin'ny Clever Ads Keyword Keyword Clever, ny fikarohana ny teny lakile dia ho haingana kokoa ary ho mora kokoa, ary afaka miverina foana ianao hanavao sy hitantana ny lisitry ny teny lakile. Hiaina fanatsarana ny SEO anao, ary ho toy izany koa ny tanjon'ny orinasao.
Fanampin'izay, tianay hianaranao amin'ny fizotrany izany, ary amin'ny maha Premier Google Partners anay, manana ny lamosinao izahay ary mampanantena fa hahazo ny tombony betsaka indrindra amin'ny fahaizanay. Tsy ho hitanao fotsiny ny teny lakile sy ny fitaovana SEO, fa ny mpiara-miasa amin'ny heloka bevava, izay tsy hanome anao ny teny lakile tadiavinao fotsiny, fa koa ny loharano sy ny fampahalalana ilainao mba ho lasa manam-pahaizana manokana amin'ny Google Ads Ho hitan'ny orinasanao ny fahasamihafana!
All-in-iray Keyword pandaharam-potoananao
Ataovy ny fikarohana ny teny lakilanao hatrany am-piandohana ka hatrany am-pamaranana nefa tsy Clever Ads dashboard an'ny Smart Ads Tsotra toa izany! Manomboka amin'ny teny fanalahidy na URL (ny fitsikilovana ireo teny lakilen'ny mpifaninana aminao dia tsy fitahina! Fetsifetsy hafa fotsiny io!) Ny fampidirana ireo tolo-kevitry ny teny nofidinao tamin'ny fampielezan-kevitra Google Ads Izy rehetra dia avy amin'ny toerana iray ihany, tsy mila manova fitaovana na takelaka fanaraha-maso. Ary maimaim-poana! Manapa-kevitra ianao!
Ny fampiasana ny Clever Ads Generation Keyword Tool Generation miaraka amin'ireo fitaovantsika hafa, izay azonao jerena ao amin'ny pejy fandraisana, dia hampitombo ny Google Ads ary hanatsara ny fanoloran-tenanao sy ny teti-bolanao. Hihatsara hatrany ny varotrao sy ny valiny ... Maninona no manatsara ny teny lakileminao raha afaka mamerina manentana ny fampielezan-kevitra manontolo amin'ny Google Ads Audit maimaimpoana izay miteraka doka manaitra sy Google Ads amin'ny tsindry vitsivitsy monja? Tantano Google Ads ary manjary tsy azo sakanana miaraka amin'ny Clever Ads . Anisan'ireo fitaovantsika hafa fa tsy ny mpandahatra ny fanamarinana sy ny teny fanalahidy ihany no ahitanao azy, fa koa ny Mpamorona Fanentanana, mpamorona Banner ho an'ny fampielezan-kevitra asehonao, fampiharana finday ahafahanao mijery sy mamakafaka ny metrika rehetra anao, ary ny fampifangaroana maro samihafa miaraka amin'ny fitaovana toa an'i Slack , Microsoft Teams na Google Chat . Jereo izy rehetra ary ataovy tsy azo sakanana ny doka amin'ny Google!
Hangataka aminao izahay mba hidira ao amin'ny kaonty Google Ads anao hamoronana ny lisitry ny teny lakile, amin'ity fomba ity dia ho foana ianao hiverina ary hitantana ny lisitry ny fikarohana nataonao. Raisinay am-pahatokisana ny tsiambaratelo momba ny angon-drakitra ary angoninay izay ilainay mba hanomezana anao traikefa tsara indrindra azo atao.